मध्यराती भारतमा कोलाहाल : चिनियाँ हतियारधारी सेना भारत पसे …अब नेपाल कस्लाइ साथ दिन्छ ? पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ – PathivaraOnline
Home > समाचार > मध्यराती भारतमा कोलाहाल : चिनियाँ हतियारधारी सेना भारत पसे …अब नेपाल कस्लाइ साथ दिन्छ ? पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ
एजेन्सी । चीन र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवादका कारण सम्बन्धमा दरार आउँने गरेको छ । चीन र भारतको हैसियतको लडाई लामो समयदेखि चल्दैं आएको छ ।चीनले भारतसँग मित्रताको नाटक गरेर गम्भिर धोका दिएको भारतले आरोप लगाएको छ । भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)को प्रतिवेदनमा चीनले एक पटक फेरि भारतीय सीमाक्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार चीनले यस पटक भारतमा घुसपैठ गर्न खोजेको छ। जम्मू र कश्मीरको लद्धाखमा, अरुणचल प्रदेशमासमेत भारतको सीमा भित्र चिनियाँ सेनाहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।आईटीबीपी प्रतिवेदन अनुसार, भारतीय सीमामा दुई चिनियाँ हेलिकप्टरहरू देखिए। यो घुसपैठ गत महिना अगस्त २७ मा भएको थियो। आईटीबीपी रिपोर्टको अनुसार, दुवै चिनियाँ हेलीककाप्टरहरू एमआई १७ जस्तै देखिरहेका थिए र उनीहरू भारतीय सीमाक्षेत्रमा लगभग ५ मिनेटसम्म रहे।
भारतीय सीमा भित्र चिनियाँ सेना प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक होईन । यो भन्दा पहिले पनि भारतीय सीमामा चिनियाँ सैनिक हात हतियार सहित प्रवेश गरिसकेका छन् ।डोकलाम विवादपछि दुई देशका बिचमा सीमा क्षेत्रमा भएको तनाब कम गर्न सहमति भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।बुर्तसे र ट्रयाक लद्दाख भारतको लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण छ। यस कारणको लागि, चीन यसको स्वामित्व लिनक लागि एक स्थानमा रहेको छ । जसको कारण उसले बारम्बार यी स्थान हडप्न खोज्ने प्रयासमा छ। अरुणाचल प्रदेशको देहाङ्ग घाटीमा स्थानीय मानिसहरूले पनि चिनियाँ सैनिकहरू देखेको दावा गरेका छन ।
यद्यपि यसको प्रतिकृयामा भारतीय सेनाले यो घुसपैठ नभएको स्पष्ट पारेको छ । सेनाको अनुसार यो एलएसी (वास्तविक नियन्त्रण रेखा) मा रहेको एक विवादको कारण मात्र पेट्रोलिंग गरिएको थियो।
भोजपुरबाट आयो यस्तो दुःखद खबर
भगवान बनेका बुद्ध एयरका क्याप्टेन लामासँग थिइन यी सहासिक युवती विमान चालिका (भिडियो सहित)
रो’ग र भोकको डरले २४ घण्टामै ५ लाखले छोडे काठमाडौं! को’रोनाको हटस्पट बन्दै राजधानि (भिडियो हेर्नुहोस)